Umxholo wendaba yethu yanamhlanje ngu "Singer Nyusha Shurochkina, biography". UNyusha Shurochkina, kwisiqinisekiso sokuzalwa u-Anna Vladimirovna Shurochkina, wazalwa ngo-Agasti 15, 1990 kwisixeko saseMoscow, kwintsapho yabaculi. Xa wayeneminyaka eyi-17 watshintsha ngokusemthethweni igama lika-Anna kuNyusha. Uyise kaNtsusha ungumculi, umculi kwithuba elidlulileyo, umlindi weqela elithi "Uthandekayo Ngamana", unina ka-Ani, u-Irina naye ungumculi. Abazali bakaNtsusha baqhawule xa bebabini. I talente yomculo yabazali yadluliselwa kwintombi. Wahlabelela cishe ukususela ekuzalweni. Ukususela kwiminyaka engama-3, u-Nyusha ubambe iqhaza kwi-vocals, utitshala wakhe wokuqala owaziwayo nguVictor Pozdnyakov. Ngokutsho kwakhe, u-Ani unentetho enhle kakhulu yendalo, okwakucelwa nguViktor. Ngethuba lonyaka wezifundo ezihlangeneyo kunye no-Anya, wavelisa uluhlu, waza wenza uthando luka-Ani ukuba lubhale. Ukususela kwiminyaka emihlanu intombi yakhe iVladimir iye yaqhuba imfundo yomculo. Kwakulo xesha u-Nyusha ebhala ingoma yakhe yokuqala "Ingoma ye-Great Bear".
UAnya uthi iimvakalelo awayezibona xa erekhodile le ngoma ziqaqambileyo ebomini bakhe. Emva kokurekhoda ingoma yokuqala, ubomi bomculo bukaNtsusha baqala ukufumana ukukhawuleza. Ucula yonke indawo, kunye nonina emotweni, kunye nogogo wakhe kwidolophana. Uqeshwe ngutitshala we-piano kunye ne-solfeggio. Kwaye eneminyaka elinesibhozo, u-Nyusha wabhala ingoma yakhe yokuqala, kwaye ngesiNgesi- "Ubusuku". Emva kwekhonsathi eCologne, uNkuusha wabuzwa apho avela khona waza weva ukuba uNtsusha waseRussia akazange akholelwe, ekubeni intombazana yayithetha kwaye yahlabelela ngesiNgesi ngaphandle kokuzimela. Ukususela kwiminyaka elisithoba, uNyuusha uya kwiindawo zokuzonwabisa zezingane kunye nomdaniso "Margaritas". Ukufundisa kwi-theatre yanika uNyusha amava amaninzi kwinqanaba. Ngo-2007, impumelelo yafika eNusha. Uba ngumndilili womncintiswano we-TV "STS ukhanyisa inkwenkwezi". Wakwazi ukunqoba kunye nokuthakazelisa ijaji, ekugqithiseni amawaka ephosa. Kwiprojekthi yethelevishini uNyusha wayejongene nengxaki ebizwa ngokuba yelwimi, kwacaca ukuba uhlabelela kakhulu ngesiNgesi kunesiRashiya.
Kulo phiswano, uNyusha wahlabelela iingoma zomculo zomculi uBianchi, uMaxim Fadeev, iqela laseRametki, umculi uFerdzhi. Ukongeza kwezinye iingoma zabantu kumncintiswano, uNyusha wenza iingoma zakhe zomculo - ingoma ethi "Angel" kunye "Ukulila ngeNyangeni". Ngomnyaka ofanayo, u-Nyusha uthatha inxaxheba kwinqaku lefilimu ethi "Enchanted" yi studio yeDisney. Wenza ingoma yokugqibela yomdlali oyintloko. Ngonyaka ka-2008, u-Nyusha waba ngumdlali wokugqibela we-International Wave 2008, apho wathatha indawo yesibhozo. Ngo-2009, owokuqala omnye womculi uNyusha "Voyu na luku" ("Ukulila kwiNyanga") wakhululwa. Ngokutsho kwamagama kaNyuusha, ingoma yabhalwa, emva kokuhlukana nomfana, kwimeko yokudakumba. Ngomculo othi "Ukulila ngeNyanga" uNusha waba ngumdlali wongoma "uThixo we-Ether 2010" kunye ne "Ingoma yoMnyaka ka-2009". Kwi-kontoni "i-Europa Plus 2009" wabonisa iingoma ezintsha ezimbini: "Kutheni" ngesiNgesi, "ingelosi". Xa kubuzwa ukuba luphi ulwimi olulula ukubhala iingoma, uNyusha waphendula ukuba wayelula ngesiNgesi, kwaye ngesiRashiya waqala ukubhala ngcebiso kayise. Iingqungquthela, eziqulunqwe nguNyusha, zingezantsi iintlobo ezahlukeneyo. Ukhetha i-hip-hop, umphefumlo, i-jazz, ngokubhekisela kuye ingoma ethandwayo, ingoma enomculo omnandi iba yintsimbi, kwaye akunandaba nokuba yeyiphi indlela. Ngo-2010, enye enye yomculi - "Musa ukuphazamisa" - ikhishwa.
Ukwenza ingoma "Musa ukuphazamisa" kwaye yachaphazela yimeko evela kubomi bukaNyuusha. I-chorus yengoma ichaza iimvakalelo zakhe. Uthi kukho abantu abanobugovu, kwaye oku kunzima kakhulu, ngakumbi kumantombazana, ndifuna ukuthetha ilizwi lam, ndiveze iimvakalelo zam. Le ngoma iba yinto ethandwa kakhulu ngo-2010. Ndiyabulela kwi-hit "Musa ukuphazamisa", u-Nyusha uba ngumnini we-award ye-Muz TV ngo-2010, kwinqanaba elithi "Ukuphumelela koNyaka". Kwakhona ngo-2010 umntu ongowesithathu wesingoma - "Ummangaliso" ukhishwa. U-Alexey Romanov, ilungu leqela elithi "iVintage", elibizwa ngokuthi le ngoma eqaqambileyo phakathi kwee-2010. Ngomculo othi "Ummangaliso" umculi wabonakalisa indlela awayefuna ngayo ukuphila. UNyusha ufuna ukuhlala ubomi obupheleleyo ngaphandle kwemida kunye nemingcele ukusuka kwicala. Ekupheleni kuka-2010, i-albhamu yokuqala ye-singoma uNyusha yakhululwa. Ukurekhoda kwe-albhamu, ngokutsho kukaNyusha, yahlala malunga nemibini emibini. Ngexesha lakhe lokukhulula, umculi weza kwi studio ukurekhoda iingoma ezilandelayo ze-albhamu. I-albhamu yayiquka ezininzi zeengoma uNyana wabhala. Iingoma ezimbini zesiNgesi zaba yinto ekhethekileyo, umculo owawubhalwe nguVladimir Shurochkin, uyise wengoma. Yena, kunye noNusha, naye ungumvelisi wale albhamu. Ngokuqhelekileyo, uVladimir kuyo yonke inkxaso kwaye unceda uNyusha, nguye yena kuqala owenza iingoma zakhe.
Okwangoku, umculi uNyusha usebenza kuphela kwi-career, waze wahlehlisela ixesha lokumkelwa kunye nokufunda kwiyunivesiti. UNyusha uthanda imidlalo, ujabulele ukudlala i-volleyball yaselwandle, ebuntwaneni, ebhokisini. Ngoku ngenxa yeshedyuli exakekileyo, kubandakanyeka ukufaneleka. Ubomi bakhe bomntu, umculi akazange anqume. Ngokutsho kwakhe, unabantu abaninzi abancinci, uninzi lwengqalelo kumntu wesilisa, kodwa engazange adibane naye kuphela. Ungumculi onjalo, u-Nyusha Shurochkina, obani bakhe bacebile kwiimeko.
Udokotela uDmitry Marianov
Kuvela nini utyalo lukayihlo?
UDmitry Hvorostovsky wahlabelela ekuvalweni "kwe-Wave entsha"
Indoda eyaziwayo ye-PR uT Tim Brick yafa kwiklinikhi yokuhlinzwa ngoplastiki
Umtshato kwi-shades ebomvu: umdaniso wesithando
Iimpazamo ezi-5 zokwenza izinto malunga nento yonke: vavanya wena!
Ukukhawuleza kubuyisela isikhumba sicocekile kwaye sikhanyisa
Indlela yokususa amajoni kunye neenkondlo
Ulusu lisesimo esibi, njani unokunceda?
Ukunyamekela kakuhle kweeyelashes
I-ingulube yenyama yengulube i-kebab